Home / Blog / Ampy ny efitra fandroana iray, maninona no mila trano fandroana roa any Sina ianao?
2021 / 04 / 12 FisokajianaBlog 7844 0
Ny haingon-trano fandroana dia fifehezana izay
Raha vao ny fisian'ny famolavolana tsy mitombina
hisy fiantraikany amin'ny index fahasambarana amin'ny fiainana isan'andro.
Mitondrà olana tsy ilaina be dia be.
Ho an'ny fianakaviana misy olona marobe.
Raha tsy misy trano fandroana roa
Ilaina ny miatrika ny tranga izay
Alohan'ny hifoha maraina sy alohan'ny hatory amin'ny alina
Ny trano fidiovana dia hiatrika ny olana tampon'ny maraina sy ny hariva.
Ary amin'ny fizotran'ny fampiasana mifantoka, ny
Ny efitrano fidiovana dia saika tsy azo atao loatra ny mandingana ilay faritra.
Hifantoka amin'ny fampiasana ny fitoeran-drano sy ny trano fidiovana ny fianakaviana.
Amin'ny alina, ny
Misy ihany koa ny filaharana ho an'ny faritra fandroana sy ny kabine.
Hanatsarana ny kalitaon'ny fiainantsika
lasa malaza ny foto-kevitra fisarahana mando sy maina.
Fa hay izany
Fisarahana mando sy maina tsy misy fisarahana trano fidiovana amin'ny maha-toerana mialoha azy.
Tsy misy dikany!
Fa maninona no hoy ianao?
Andeha hojerentsika ny fizarana ankapobeny amin'ny trano fidiovana anatiny!
Amin'ny ankapobeny, toa izao ……
Na lamina toradroa toy izany
Ny faritry ny trano fidiovana, ny faritra fandroana ary ny faritra fidiovana dia voalamina eo amin'ny toerana iray ihany, ary ny varavarana fitaratra amin'ny faritra fandroana dia fizarana tsotra fotsiny, tsara raha mipetraka irery ianao, fa rehefa mahazaka olona roa ka hatramin'ny telo ary sendra nifanandrify tamin'ny fihazakazahana maraina, ny olona iray handeha ho any amin'ny trano fidiovana ary ny iray kosa tsy maintsy hiandry fatratra.
Mazava ho azy, mba hanatsarana ny fahombiazan'ny fampiasana ny trano fidiovana, ny olona dia tsy naka ny hilentika tsy miankina amin'ny fomba. Saingy mbola toy izany ihany, te-handro tsara ianao, ety ivelany mikiakiaka manao hoe: “Mila mankany amin'ny trano fidiovana aho” ……
Ary ity fomba fanao ity dia tsy mitarika ny "fisarahana mando sy maina" - aorian'ny fandroana ny rano ao amin'ny trano fandroana dia maharitra fotoana lava hanariana, handemana ny faritra fidiovana; ny bakteria any an-kabone koa handoto ny lamba famaohana sy ny fitafiana.
Ka ahoana no tokony hamahana izany olana izany? Andao hiresaka ny fahendrena amin'ny fampiasana fandroana Japoney.
Karazana efitra fandroana telo misaraka
Voalohany indrindra, ny fandroana Japoney amin'ny ankapobeny dia mampiasa "fisarahana telo", manasaraka ireo faritra telo amin'ny fandroana, fanasana sy fidiovana.
Na inona na inona karazana tokantrano, ny iray amin'ireo hevitra famolavolana mirindra sy manan-danja indrindra dia ny tsy miankina ny efitrano fidiovana! Tsy vitan'ny hoe misy akony amin'ny fahafaha-mampiasa azy amin'ny ankapobeny, fa tsy miankina amin'ny faritra hafa koa.
Mazava ho azy fa misy fianakaviana sasany koa mampiditra ny efitrano fanasan-damba, ka ny "karazana fisarahana telo" dia lasa "karazana fisarahana efatra". Ao amin'ny toerana iray ihany, ny fandroana, koveta, lovia fanasan-damba ary trano fidiovana dia natambatra ary tsy misy ifandraisany.
Ny tombony amin'ny fisanganana toy izany dia ny mamorona tsipika mirindra, izay mamaha amin'ny fomba mahomby ny fetra amin'ny tokantrano kely ary mamaly ny filan'ny fampiasana isan-karazany ny fianakaviana.
Ny fandaminana ny efitrano fidiovana tsy miankina Japoney, tsy toerana kely fotsiny ahafahan'ny vatana mihodina malalaka, fa koa mandray ny valin'ny lamba famaohana taratasy, lamba famaohana, fitaratra, ary na koa milentika aza, mamorona serivisy fijanonana tokana.
Fehin-kambana misy lamba famaohana taratasy roa eo amin'ny fametrahana partitions, manampy amin'ny fametrahana telefaona finday na zavatra kely hafa, taratry ny antsipirian'ny fikarakarana "mahaolona".
Mifanaraka amin'ny fitsipiky ny tsy fandaniam-potoana, ny fizarazaran-tahiry ao ambadiky ny kabine dia afaka mamaha ihany koa ireo olana fitahirizana ilaina.
Ny fampiasana rano fanodinana handosirana ny trano fidiovana dia tsy manarona faritra kely iray ihany, fa koa fomba famoronana endrika milamina sy mahavonjy angovo.
Ka inona no nahagaga ny mpamorona japoney: nahoana isika no mila trano fidiovana roa ao Shina?
Misy fomba maro samihafa handaminana trano fandroana, fa ny hevitra vaovao tsirairay dia mikendry ny hanatsara ny kalitaon'ny olona. Raha mbola manapaka ny fisainana hentitra ianao, arakaraka ny fahazarana amin'ny famolavolana antonony, dia ahazoana aina kokoa ny mampiasa azy!
Previous :: Ny efitrano fandroana ao an-trano, misafidy ny trano fidiovana amin'ny rindrina? Sa trano fidiovana gorodona? Next: Fa maninona no tsara tarehy foana ny fandroana an'ny olon-kafa?